ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားအစိတ်အပိုင်းအတွက် 2. Terminal နှင့်လျှပ်စစ် actuator turn
AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားအစိတ်အပိုင်းအတွက် 3. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးသော့ခလောက်လျှပ်စစ် actuator turn
တစ်ခုချင်းစီကို AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator turn IS09001 အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည့် AOX အရည်အသွေးစနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထုတ်လုပ်: 2000 ။ အဆိုပါ AOX အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်လက်မှတ်၏ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျထုတ်ကုန်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များထုတ်ကုန် quality.According ၏အာမခံချက်ရှိသည်, တစ်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း system ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AOX တင်းကြပ်စွာထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ။ , သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုစံချိန်စံညွှန်းများတည်ထောင်ရန်စမ်းသပ်ညွှန်းကိန်းများကိုတွက်ချက်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များကုမ္ပဏီ၏စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ထုတ်လုပ်မှုအာမခံပါသည်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဖော်ပြရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany အမည်ဖြင့်လျှပ်စစ် actuator သို့မဟုတ်အထုပ်ကိုဖွင့်ရနိုင်မလား?
ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ် AOX-မေးစီးရီးပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်အကြောင်းကိုအခြားအပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
hot Tags:: ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်